Atsimo Andrefana: nanomboka ny fambolen-kazo | NewsMada
Atsimo Andrefana: nanomboka ny fambolen-kazo
Nosokafana ny zoma 18 janoary teo, ny fotoana fambolen-kazo 2019 tany amin’ny faritra Atsimo Andrefana tany Andranovory. Nahatratra 10.000 ny zana-kazo nambolena, nahitana acacia, kininina, karabo, miampy zana-kazo fihinamboa miisa 700, nomena ny fokonolona any an-toerana.
Saika nandray anjara tamin’ity fambolen-kazo ity avokoa ny mpisehatra amin’ny tontolo iainana any Atsimo Andrefana. Anisan’izany ny fikambanana miaro ny tontolo iainana, ny WWF, ny mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy ara-bola (PTF) samihafa, ny miaramila, ny zandary, ny fiarahamonim-pirenena, sns.
Misy ny fanaraha-maso ny hazo novolena, afaka volana vitsivitsy. Voalaza fa naniry tsara avokoa ny 75%-n’izy ireo raha jerena ny tato anatin’ny telo taona farany, tany amin’ny faritra Atsimo Andrefana. Nanome toky ireo mpisehatra rehetra fa samy hanohy ny fambolen-kazony avy izy ireo aorian’ity fanokafana ity.